June 2017 - RastraKhabar-Nepal's Popular Digital Newspaper
June 24, 2017 rastrakhabar 0
काठमाडौँ : नेपाल ताराको थर्ड सिजनका विजेता प्रताप लामा अहिले जारी नेपाल आइडलको गाला राउन्ड नपुग्दै आउट भएका छन्।
शुक्रबार प्रसारण भएको ‘नेपाल आइडल’ को ‘अग्निपरीक्षा’ राउन्डमा दर्शकबाट प्रशस्त भोट नआएपछि लामा गाला राउन्डमा पुग्नबाट वञ्चित भएका हुन्।
लामाले दुई वर्षअघि भएको नेपाल ताराको फाइनलमा दिवेश राई र सुरेश लामालाई पछि पार्दै साढे दुई लाख रुपैयाँको नगद पुरस्कार पएका थिए।
नेपाल आइडलका लागि काठमाडौँमा अडिसन दिएका लामालाई अडिसनमै जजहरु प्रभावित भएका थिएनन्। उनलाई तीन वटा गीत गाउन लगाइएको थियो।
रोचक त के छ भने नेपाल आइडलका एक जज इन्दिरा जोशी पनि नेपाल ताराको पहिलो सिजनकै एक प्रतिस्पर्धी थिइन्। तर उनले कुनै पनि उपाधि जित्न भने सकेकी थिइनन्।
नेपाल आइडलबाट प्रताप लामासँगै सुरज तामाङ र प्रज्ञा श्री विश्वकर्मा पनि भोटिङ राउन्डबाट आउट भएका छन्।
जेनेभा: अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्मेलनभाग लिन जेनेभामा पुगेकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शनिबार जेनेभा तालमा नौका बिहार गरेकी छन्।
उनले शनिबारै यहाँको पुरानो बस्ती मानिने वल्र्ड टाउनमा पैदल हिँडेर अवलोकन गरिन्। पुरानो बस्ती भएकाले यो स्थानमा हाल यातायात सञ्चालन हुँदैन।
उक्त अवसरमा स्विट्जरल्यान्डका लागि नेपालका राजदूत तथा संयुक्त राष्ट्र सङ्घका लागि स्थायी प्रतिनिधि दीपक धिताल र परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव शङ्करदास वैरागीलगायत भ्रमण दलका सदस्य सहभागी थिए।
‘१०६औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्मेलन’को एक भागका रूपमा रहेको ‘रोजगारीको विश्व शिखर बैठक’ मा सहभागिता जनाएपछि उनी अन्य भ्रमण कार्यक्रममा सरिक भएकी हुन्।
उनी आजै संयुक्त अरब इमिरेट्सको अबुधाबीतर्फ प्रस्थान गर्ने र आइतबार साँझ काठमाडौँ पुग्नेछिन्। रासस
भारतका राष्ट्रपतिका रुपमा रामनाथ कोविन्दलाई रोजे मोदीले
भारतीय जनता पार्टीले वरिष्ठ नेता तथा बिहारका गभर्नर रामनाथ कोविन्दलाई आगामी राष्ट्रपतिका रुपमा प्रस्ताव गरेको छ। राष्ट्रपति निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा भाजपाले कोविन्दको नाम अघि सारेको हो। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अध्यक्षतामा बसेको भाजपा संसदीय बोर्डको बैठकले उनको नाम अघि सारेको हो।
कोविन्द को हुन् त? धेरैलाई चासोको विषय हुनु स्वभाविक हो।
पढ्नुस् कोविदका दश तथ्य :
१. ७० वर्षीय कोविन्द कानपुरका दलित नेता हुन्। उत्तर प्रदेशमा दलितको संख्या ठूलो रहेकाले उनको उम्मेदवारीलाई भाजपाको हिन्दी बाहुल्य भएको युपीमा पकड जमाउने रणनीतिका रुपमा लिएको छ। सन् १९९८ देखि २००२ सम्म भाजपाको दलित मोर्चाका अध्यक्षसमेत रहिसकेका छन् उनी।
२. कोविन्द उत्तर प्रदेशबाट राज्यसभामा दुई पटक निर्वाचितसमेत भइसकेका छन्। पेशागत रुपमा अधिवक्ताका हैसियतले उनी भारतको सर्वोच्च अदालतमा वकालत गर्थे। सन् २००२ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा उनले सम्बोधनसमेत गरेका छन्।
३. कानपुर कलेजबाट कानुनमा स्नातक गरेका उनी दिल्लीमा इन्डियन एडमिनिस्ट्रेटिभ सर्विस (आइएएस) को परीक्षा दिँदा दुई पटक फेल भएका थिए भने तेस्रो पटकमा सफल। तर, सफल भए पनि उनी सेवामा छिरेनन्।
४. उनले कानपुरमा रहेको आफ्नो पुर्ख्यौली घर समुदायलाई सुम्पिएका छन्। समुदायले त्यसलाई वारात घर अर्थात् सामुदायिक भवनका रुपमा प्रयोग गरिरहेको छ।
५. सन् १९७७ मा भाजपा प्रवेश गर्नुअघि उनले प्रधानमन्त्री मोरारजी देसाईका निजी सचिवका हैसियतमा काम गरेका थिए।
६. कोविन्द उम्मेदवारहरुले निर्वाचनमा महत्वपूर्ण सफलता पाएका छन्। सन् २०१२ को उत्तर प्रदेशको निर्वाचनमा राजनाथ सिंहले कोविदको सहयोगमा चुनावी अभियान गरेका थिए। युपीमा उनलाई लामो समयदेखि मायावतीको बलिया प्रतिपक्षीका रुपमा बिजेपीले स्वीकारेको थियो।
७. बिहार गभर्नरका रुपमा उनको नियुक्तिलाई आगामी संसदीय निर्वाचनमा दलित समुदायको भोट तान्ने रणनीतिका रुपमा लिइएको थियो।
८. बिहारका मुख्यमन्त्री नितीशकुमार भने उनको नियुक्तिलाई लिएर सन्तुष्ट थिएनन्। उनले संविधानविपरित नियुक्ति गरिएको आरोप लगाउँदै आएका थिए।
९. बिहार गभर्नरका हैसियतमा कोविदले लालुप्रसाद यादवका छोरा तेजप्रताप यादवलाई सपथ ग्रहण दोहोर्‍याउन लगाएका थिए। हिन्दी शब्द ‘अपेक्षित’लाई ‘उपेक्षित’ उच्चारण गरेको भन्दै कोविदले सपथ ग्रहण दोहोर्‍याएका थिए।
१०. यद्यपि, विजेपीले दलित र पिछडिएको समुदायबाट उम्मेदवार पाएको छ जो पहिले उत्तर प्रदेशका कानुन व्यवसायीसमेत रहेका थिए। राष्ट्रपतिका रुपमा उनलाई उभ्याएपछि बिजेपीमाथि लाग्ने गरेको ‘माथिल्लो जातिको प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टी’को इमेजलाई सन्तुलनमा ल्याएको छ।
(यो सामग्री इकोनोमिक टाइम्सबाट लिइएको हो)
June 23, 2017 June 24, 2017 rastrakhabar 0
काठमाडौं महानगरपालिकाले जनप्रतिनिधिलाई मोबाइल किन्न पैसा दिने निर्णय फिर्ता लिएको छ।
शुक्रबार बसेको महानगरको कार्यापालिका बैठकले यसअघि जनप्रतिनिधिलाई मोबाइल किन्न ३० हजार रुपैयाँ दिने निर्णय फिर्ता गरेको महानगरका सहायक प्रवक्ता नमराज ढकालले सेतोपाटीलाई जानकारी दिए। ‘जनभावनाको कदर गर्दै मोबाइल किन्ने निर्णय फिर्ता गरेका हौं’, ढकालले भने।
यसअघि गत मंगलबार बसेको महानगरको कार्यपालिका बैठकले सम्पूर्ण कार्यापालिका सदस्यलाई एक थान मोबाइल किन्न प्रतिव्यक्ति ३० हजार रुपैयाँ छुट्याउन निर्णय गरेको थियो। सो निर्णयको चौतर्फी आलोचना भएपछि महानगरले निर्णय फिर्ता गरेको हो।
June 23, 2017 rastrakhabar 0
मुस्लिम समुदायले मनाउने एक महिने रमदान उल मोबारक शुक्रबार सकिएको छ। अरबिक पात्रोअनुसार रमदान नवौं महिनाको अन्तिम दिन आकाशमा चन्द्रमा देखिएपछि महिना दिनको रोजा (व्रत) सकिन्छ। रमदान सकिएको भोलिपल्ट अर्थात् दसौं महिनाको पहिलो दिनदेखि मुस्लिमहरूको अर्को महत्त्वपूर्ण पर्व इद उल फितर शनिबार सुरु हुनेछ। यसै अवसरमा सरकारले सोमबार सार्वजनिक बिदा दिएको छ।
काठमाडौं । श्रममन्त्री फरमुल्लाह मन्सुरले कतारमा विकसित पछिल्लो घटनाक्रमले त्यहाँ कार्यरत नेपालीलाई कुनै असर नगरेको बताएका छन् ।
June 22, 2017 rastrakhabar 0
काठमाडौँ । सुजुकीले असार ७ गते काठमाडौंको रवि भवनमा अन्तर्राष्ट्रिय स्ट्याण्डर्डको शोरुम र ललितपुरको धोवीघाटमा स्टेट अफ आर्ट सेवा केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएको छ ।
शोरुम र सेवा केन्द्र दुबैको समुद्घाटन एमएसआइएलका कार्यकारी निर्देशक ईन्टरनेशनल मार्केटिङ् डिभिजन, शशांक श्रीवास्तवा र सीजी होल्डिङ्सका अध्यक्ष तथा कार्यकारी निर्देशक अरुण चौधरीको उपस्थितिमा गरिएको हो । कार्यक्रममा चौधरीले आफ्ना उपभोक्तालाई सन्तुष्टि प्रदान गर्न विश्वस्तरिय विक्रि तथा सेवा केन्द्रको आवश्यकता भएको बताए ।
फिफा कन्फेडेरेसन कपः मेक्सिकोद्वारा न्युजिल्यान्ड पराजित
June 22, 2017 June 22, 2017 rastrakhabar 0
काठमाडौं । रुसमा जारी फिफा कन्फेडेरेसन कप फुटबलमा मेक्सिकोले न्युजिल्यान्डलाई पराजित गरेको छ । बुधबार राती भएको खेलमा मेक्सिकोले न्युजिल्यान्डलाई २ – १ ले पराजित गरेको हो ।
सोचिमा भएको खेलमा मेक्सिकोलाई जित दिलाउन राउल जिमेनेज र ओरिबे पेराल्टाले समान एक एक गोल गरे । न्युजिल्यान्डका कृष उडले एक गोल फर्काए । खेलमा सुरुवाती अग्रता भने न्युजिल्यान्डले पहिलो हाफको ४२ औं मिनेटमा उडको गोलबाट लिएको थियो । तर, दोस्रो हाफमा मेक्सिको खेलमा फर्कदै जित निकाल्यो ।
दोस्रो हाफको ५४ औं मिनेटमा जिमेनेजले गोल गर्दै खेल १ – १ को बराबरीमा ल्याए । खेलको ७२ औं मिनेटमा पेराल्टाले गोल गर्दै मेक्सिकोलाई २ – १ को अग्रता दिलाए । त्यसपछि खेलमा थप गोल हुन् सकेन र खेल मेक्सिको पक्षमा गयो ।
जितसँगै मेक्सिको समूह ए को शिर्ष स्थानमा उक्लिएको छ । र, मेक्सिकोको सेमिफाइनल सम्भावना बलियो बनेको छ । पहिलो खेलमा पोर्चुगलसँग अंक बढेको मेक्सिकोले २ खेलबाट ४ अंक जोडेको छ । यस समूहमा पोर्चुगलको पनि ४ अंक छ तर गोल अन्तरमा मेक्सिको अघि छ । पराजित न्युजिल्यान्ड अंकबिहिन छ ।
June 21, 2017 rastrakhabar 0
पोखरा /जुन २३ तारिख यही असार ९ गते अर्थात अन्तराष्ट्रिय ओलम्पिक दिवस । यसै अवसरमा पोखरामा संचारकर्मीको ५ किलोमिटर सडक दौड हुने भएको छ । भूतपुर्व खेलाडी मञ्च नेपालको आयोजनामा स्वर्गीय शिव शंकर रन्जितको स्मृतिमा उनको परिवारजनबाट प्रायोजित उक्त सडक दौड प्रतियोगिता हुने भएको आईतबार पोखरामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराईएको हो । मञ्च नेपालका अध्यक्ष तेज बहादुर गुरुङले समाजमा खेलप्रतिको संस्कारको विकास गर्दै खेलकुदको आकषर्ण बढाउन पनि संचारकर्मीलाई मात्र लक्षित गरी उक्त दौड प्रतियोगिता आयोजना गर्न लागिएको बताए । प्रतियोगितामा पुरुष तर्फ ३० र महिला तर्फ २० जनाको सहभागिता हुने अपेक्षा गरेको बताउदै गुरुङले दुबै टिमका बिजेतालाई जनही ७ हजार, उपविजेतालाई जनही ५ हजार र तेश्रो हुनेलाई जनही ३ हजार साथमा मेडल र प्रमाणपत्र प्रदान गरीने भएको छ । दर्ता शुल्क २० रुपैया रहेको प्रतियोगितामा महिला संचारकर्मी कम्तिमा पनि १५ जना प्रतियोगिहरु सहभागी हुनु पर्ने आयोजकले वनाएको सचिव कृष्ण तिमिल्सिनाले बताए । उक्त कार्यक्रम सम्पन्न गर्न करिब ६१ हजार खर्च लाग्ने भएको खेल संयोजक खेम बहादुर गुरुङले बताए । स्वर्गीय रन्जितका छोरा डा.निरज रन्जितले आफ्नो बाबुको स्मृतिमा संचारकर्मीको दौड निरन्तर हुनुपर्नेमा जोड दिए । मञ्चका अध्यक्ष तेज बहादुर गुरुङको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा निवर्तमान अध्यक्ष खड्ग बहादुर रानाभाट, उपाध्यक्ष दील बहादुर गुरुङ, नेपाल पत्रकार महासंघ कास्कीका सह–सचिव एवं खेलकुद पत्रकार मञ्च कास्कीका उपाध्यक्ष दीननाथ बराल, संचारिका समुह पश्चिमाञ्चलका संयोजक जमुना बर्षा शर्मा लगायतले उक्त प्रतियोगितालाई सफल पार्न आफ्नो तर्फबाट सहयोग गर्ने वचन दिए । उक्त दौड प्रतियोगिता मानव अधिकारचोकबाट सुरु भई महेन्द्रपुल, नयाँबजार, पृथ्बीचोक, सभागृहचोक, सृजनाचोक, जाल्पारोड, बगालेटोल, हुदै पुनः मानवअधिकारचोकमा पुगेर समापन हुने भएको संयोजक गुरुङले बताए । मञ्चका आजिवन सदस्य ह्याण्डवलका पुर्व खेलाडी ज्वाला थापालाई खादा लगायर वेलायत वसाईको सफलताको कामना गरेका थिए ।